DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP LASERJET 1020 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Onye na-akwọ ụgbọala maka HP Laserjet 1020 Printer
E nwere stereotype banyere nzube nke ngwaọrụ nke oge a naanị iji nweta ọdịnaya. Otú ọ dị, ọ naghị ejide mmiri, ọ bara uru naanị ịmara ihe ndepụta nke ngwa maka ndị ọrụ okike. Ndepụta a gụnyere ohere maka ọrụ ọrụ ntanetị dijitalụ (DAW), n'etiti nke FL Studio Mobile guzo - nsụgharị nke usoro nnukwu na Windows, zigara gam akporo.
Enwe obi ụtọ na njem
A na-eche echiche nke ọ bụla n'ime isi windo ngwa ahụ ma dị mfe iji ya, n'agbanyeghị na ọ dị njọ.
Dịka ọmụmaatụ, a na-egosipụta ngwá ọrụ ọ bụla (mmetụta, njirisi, synthesizer, wdg) na windo ahụ na agba ndị ọ bụla.
Ọbụna onye mbido agaghị achọ ihe karịrị minit 10 iji ghọta ha.
Na menu nhọrọ nke FL Studio Mobile, nwere ike ịnweta site na ịpị bọtịnụ na mbiet nke mkpụrụ osisi-ngwa nke ngwa ahụ, e nwere panel nke ngosi ndị ngosi, ngalaba ntọala, ụlọ e wuru na ihe "Ekekọrịta"nke ị nwere ike ịmegharị ọrụ n'etiti nsụgharị mobile na desktọọpụ nke usoro ihe omume ahụ.
Site ebe a ị nwere ike ịmalite ọrụ ọhụrụ maọbụ gaa n'ihu na-arụ ọrụ na otu dị.
Akwụkwọ na akara ngosi nke ngwá ọrụ ọ bụla na-emepe menu a.
Ị nwere ike ịgbanwe olu di egwu, gbasaa ma ọ bụ dị warara nke panorama, gbanwee ọwa na ma ọ bụ gbanyụọ.
E nwere ngwaọrụ
N'igbe ahụ, ụdị ngwá ọrụ na FL Studio Mobile bụ obere.
Ka o sina dị, ọ ga-ekwe omume ịgbasawanye ya site na iji ngwọta nke atọ - enwere ntuziaka zuru ezu na Ịntanetị. Rịba ama na e mere ya maka ndị ọrụ nwere ahụmahụ.
Na-arụ ọrụ na ọwa
Na nke a, FL Studio Mobile dị ka ọ dị iche na nke ochie.
N'ezie, ndị mmepe na-eme mgbanwe maka njirimara nke eji ejiji - enwere ohere dị ukwuu iji mee ka ohere nke ọwa rụọ ọrụ.
Ngwa ahụ nwere ike ịhọrọ ụdị ihe ndị ọzọ na-abụghị ihe ndabara.
Nhọrọ nke ụda dịnụ dị nnọọ ukwuu ma nwee ike imeju ọbụna ndị na-egwu egwu dijitalụ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike itinye ihe nlele gị.
Na FL Studio Mobile, ihe ngwugwu ngwaọrụ dị. A na-akpali ha site na ịpị bọtịnụ na akara ngosi equalizer n'elu ngwá ọrụ dị n'aka ekpe.
A na-agbanwe usoro na ọnụ ọgụgụ nke bekee kwa nkeji na ngwá ọrụ dị mfe.
Enwere ike ịhọrọ uru a na-achọ. I nwekwara ike iji aka gị rụọ ọrụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Pịa": A ga-etinye uru BPM dabere na ọsọ na-agbanye bọtịnụ ahụ.
Ijikọ MIDI Instruments
FL Studio Mobile nwere ike ịrụ ọrụ na ndị na-achịkwa MIDI mpụga (dịka ọmụmaatụ, keyboard). Ejiri njikọ site na nhọrọ pụrụ iche.
Na-akwado nkwurịta okwu site na USB-OTG na Bluetooth.
Iji mee ka usoro nke imepụta ihe dị mfe, ndị mmepe agbakwunyewo ngwa ahụ ike ịmepụta autotracks - rụọ ọrụ ọ bụla ntọala, dịka ọmụmaatụ, onye igwekota.
A na-eme nke a site na ihe menu "Tinye akpaaka soro".
Ọ dị mfe ịmụta;
Ikike ijikọta nsụgharị desktọọpụ;
Tinye ngwá ọrụ gị na ihe ntanetị;
Nkwado MIDI nkwado.
Enweghị nsụgharị ngosi.
FL Studio Studio bụ usoro dị nnọọ elu maka ịmepụta egwu kọmputa. Ọ dị mfe ịmụta, dị mfe iji, na ekele na ya jikọtara na mbipụta desktọọpụ, ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ nke na -emepụta eserese, nke nwere ike na-eburu n'uche na kọmputa.
Zụta FL Studio Mobile
Download ngwa ngwa kachasị ọhụrụ nke ngwa ahụ na Ụlọ Ahịa Google Play